Donald Trump oo shaaciyay inuusan xiri doonin Hillary Clinton, uuna ula dhaqmi doono si wanaagsan – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Donald Trump oo shaaciyay inuusan xiri doonin Hillary Clinton, uuna ula dhaqmi doono si wanaagsan
Madaxweynaha cusub ee loo doortay dalka Mareykanka Donald J Trump ayaa markii ugu horeeysay shaaciyay inuu ka laabtay hadal uu ololihiisa doorashadda ku shaaciyay oo ahaa inuu xiri doono Hillary Clinton oo xilligaasi doorashada kula tartameeysay.
Donald Trump oo habeenkii xalay wareysi siiyay teleefishinka CBS ayaa sheegay inuusan waxyeeleyn doonin Hillary Clinton iyo qoyskeeda islamarkaana uu ula dhaqmi doono si wanaag ku jiro.
Hillary Clinton oo tartanka doorashada kula jirtay Donald Trump, ayaa waxa lagu eedeeyay inay isticmaali jirtay emailo gaar ah oo ammaankiisa sugneyn, xilligii ay aheyd xoghayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka.
Donald Trump ayaa intii uu ku jiray ololihiisa doorasho waxa uu ku hanjabay inuu xiri doono Hillary Clinton islamarkaana uu baaritaano dheeraad ah ku sameyn doono e-mailada gaar ah oo ay adeegsan jirtay.
Si kastaba ha ahaatee, dhawaan ayay ahayd markii madaxa hay’adda dambi baarista Mareykanka ee FBI-da James Comey uu shaaciyay in Hillary Clinton wax dambi ah lagu waayay, kadib markii ay baaritaano dheeraad ah ku sameeyeen dhamaan emailadii ay hore u isticmaashay xilligii ay ahayd xoghayaha arrimaha dibadda ee dalkaas.